INovair ifumana i-A321neo yayo yokuqala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » INovair ifumana i-A321neo yayo yokuqala
Airlines • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • Iindaba zaseSweden eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-charter ye-charter yaseSweden i-Novair, ithathe ukuhanjiswa kwe-A321neo yayo yokuqala ngokuqeshisa kwi-Air Lease Corporation (ALC). I-A321neo izakujoyina inqwelo moya esele ikho yeNovair yeenqwelo moya zoSapho ezimbini zeA320.
Inqwelomoya ixhotyiswe ngezihlalo ezitofotofo ezingama-intshi ezi-18 kuhlelo olunye lwabakhweli abangama-221. Ixhaswe ziinjini zeCFM LEAP-1A, i-A321neo iya kusekelwa eStockholm kwaye isebenzise iinqwelomoya ukusuka eSweden, eDenmark naseNorway ukuya kwiindawo ezisemazantsi eYurophu nase-Egypt.
Intsapho ye-A320neo ifaka ezobuchwephesha zakutshanje kubandakanya iinjini zokuvelisa ezintsha kunye neeSharklets, ezidibanayo zihambisa ubuncinci iipesenti ezili-15 zokonga amafutha xa ziziswa kunye neepesenti ezingama-20 ngowama-2020 kunye nokucutha ingxolo ngama-50 epesenti. Ngaphezulu kwee-odolo ezingama-5,000 92 ezifunyenwe kubathengi abangama-2010 ukusukela oko yasungulwa ngo-320, usapho lwe-A60neo lubambe isabelo esimalunga neepesenti ezingama-XNUMX kwintengiso.